Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/10/2020)
Misa i- Louvre okwesikhathi Ukubheka ngesikhathi Mona Lisa noma usebenzise labo glutes ngu ukugibela Arc de Triomphe. Jabulela cruise idina Rhine, ukuyovakashela ezinye boutiques French, futhi uthathe i-Eiffel tower ekhazimulayo njengoba iphile kusihlwa.
Ngeke ufuna ugijimele kuleli dolobha, ngakho hlelani isikhathi sakho ngendlela efanele. Noma ngabe ushona le Harry Potter studios (ihora ukusuka edolobheni), noma umane ukungenisa izimpawu zendawo ezinkulu njengo-Tower of London, St. SikaPawulu Cathedral, Westminster Abbey, uBig Ben, noma i-London Eye, njalo ngeminithi wachitha eLondon yithuba ukuze ufunde kabanzi mayelana ezweni lakhe Empire kanye wawufinyelela emhlabeni wonke.
I Eurostar ngesivinini isitimela kukuthatha kusukela Paris London isikhungo nje amahora amabili, okuyinto izindlela uzoba ukuchitha kancane isikhathi wokujikeleza isikhathi esiningi adventuring. Ngakho, sicabanga London ukuba omunye the best dolobha European uvakashe ngesitimela.
3. Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela: Amsterdam, Netherlands
Eyehlukile capitals Western Europe, EPrague iyinhloko-dolobha ye-Czech Republic eMpumalanga Yurophu elinye lamadolobha iningi abadumile-Central European. Ikhaya ukuze wemitapo kakhulu labadvumile emhlabeni, the Klementium, EPrague ibonisa isiko laso emhlabeni wonke amagumbi. Vakashela Wewashi Lomkhathi, omdala yokusebenza iwashi emhlabeni. Thatha ukungcebeleka emhlabeni Old Town Square, lapho cobblestone ezitaladini nezindawo zokuhamba okungelula ukuba pedestrianized kusho ungachitha amahora ezulazulayo ngaphandle kokukhathazeka.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / yona / de noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
inhlokodolobha izihloko europeantravel europetrains i-eurotrip London Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance travelgermany travelnetherlands